06/07/2018 - Page 2 sur 3 -
Fahadisoam-panantenan’ny SSM : Nanohitra ny Mapar ary niverina an-dalambe
06/07/2018 admintriatra 0
Nanatanteraka hetsika goavana tetsy Ambohijatovo ireo sendika izay mivondrona anatin’ ny SSM na ny firaisan’ny sendika eto Madagasikara, taorian’ ny fifanakalozana tetsy Ambohijatovo moa dia nisy ny diabe izay notontosain’izy ireo niakatra an’Antaninarenina. Marihina fa …Tohiny
Mahajanga : Nisy naka an-keriny i Hirdjee Jina Nassaraly
Teratany karana manodidina 58 taona antsoina hoe Hirdjee Jina Nassaraly, mpandrafitra no sady mpanao fanaka no nalaina dimy lahy an-keriny tany amin’ny Village touristique Mahajanga, omaly tokony ho tamin’ny 10 ora maraina. Araka ny loharanom-baovao …Tohiny
67Ha : Mpanao trano maty natsipin’ny herinaratra
Lehilahy 28 taona, mpanao trano antsoina hoe Mahefa, manambady ary manan-janaka telo no maty tsy tra-drano rehefa natsipin’ny herinaratra avy amin’ny andrin-jiron’ny Jirama , omaly tokony ho tamin’ny 10 ora maraina. Teny 67Ha, akaikin’ny Assurane …Tohiny
Lozam-piarakodia tany amin’ny RN7 : Olona 4 no maty, maherin’ny 6 naratra
Nitrangana lozam-pifamoivoizana indray tany amin’ny lalam-pirenena faha-7. Vehivavy miisa roa sy lehilahy roa no fantatra fa indray namoy ny ainy nandritra izany. Ny antoandron’ny alarobia tokony ho tamin’ny 2 ora no nitrangan’ny loza mahatsiravina. Raha …Tohiny
Rajoelina-MAPAR : Mitady fotodrafitrasa hotokanana
Tokony ho notokanana omaly ny kianjan’ny Fahaleovantena, izay namboarina tamin’ny alalan’ny volan’ny PLD (comité local de développement), sy ny lapan’ny vahoaka, izay ny minisiteran’ny Vola sy ny Teti-bola tanteraka no miantoka ny fanamboarana ireto fotodrafitrasa ...Tohiny
Governemanta “Tetezamita” : Mampanjaka ny gaboraraka
Filoham-pirenena maro :VOALOHANY TETO AMIN’NY TANTARA